I-Amino iqinisekisa iiAria zixhobo kunye ne-Minerva 10 yesikhulumi se-TV esiphezulu se-Pay - I-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat. Umsasazo osemthethweni we-NAB Bonisa, uMvelisi we-NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » I-Amino iqinisekisa iiAria ezixhobo kunye ne-Minerva 10 yesikhulumi se-TV esiphezulu
I-Amino, iprojekthi ye-IP / Cloud ye-software kunye nesicatshulwa secebo, namhlanje ivakalise ukuba i-Aria 6 ifowuni yeTV ye-hybrid iye yaqinisekiswa kwi-platform ye-Payer ye-Payer 10-Minerva.
I-Minerva kunye ne-Amino baye babambisana namakhulu emisebenzi yee-operators emhlabeni jikelele kunye nesisombululo sabo esihlangeneyo esimele IPTV kwendalo kwishishini. Okwangoku, ezi nkampani zisebenza ngokusebenza kunye nenani labasebenzi ukuba baqulunqe iinkonzo zokuzonwabisa ezizayo.
I-platform ye-Minerva ye-10 ifaka isethi epheleleyo yezicelo zikamabonwakude kuquka inkqubo yekhompyutha yesikhokelo (EPG), i-DVR ene-device kunye nenethiwekhi, i-DVR yasekhaya yonke, iTV yokuThola, i-Pause Live TV kunye nokuqalisa kwakhona iTV. Ukongezelela, unikeza ukufikelela kwimiba ye-pay-per-view, i-video-on-demand (VoD) kunye neenkonzo ze-SVOD kwaye idibanisa imithombo yevidiyo kwi-over-top-top
I-Aria 6 yindlela yakutshanje kwinqanaba elide lamadivayisi ase-Amino ukuphumeza isatifikethi seMinerva. Isixhobo somthengi we-HEVC esiphezulu se-HEVC eneenketho ze-tuner, i-Aria 6 inika ithuba lomsebenzisi ongenamandla odibanisa neenkonzo ze-OTT. Ixhaswe ngumprosesa we-6K we-DMIP, kunye ne-1GB yememori ebhodini ukubonelela ngeendlela eziguquguqukayo zokunikezela ngeendleko ngokuhambisa i-hybrid IPTVIinkonzo ze-OTT kwiinkalo zee-IP kunye nezokuthungelwano.
U-Amino CTO uMarques Evensen wathi: "Olu qeqesho lwakutsha luye lwazisa kakhuluIPTV i-ecosystem ehlabathini - kwaye igxininisa ubudlelwane bethu obude kunye neempumelelo ekunikezeni izisombululo eziphezulu kwiimarike ze-TV. Bobabini i-Aria kunye ne-Minerva i-10 bayisinyathelo-sitshixo ekunikeni abasebenzisi ukuba banikele ngeenkonzo eziphambili ezidibanisa ukulungelelaniswa kweenkonzo zangaphakathi kunye neentetho ezintsha zeTV ze-2.0 zabathengi.
I-VP Marketing yeMetro Cuson yongezelela: "I-Minerva ivuyiswe ukuba ikwazi ukunikela nge-Aria 6 kubaxhasi bethu. Ikhefu kunye IPTV abaqhubi baya kuxhamla kwimbali ende Amino kunye neMinerva banokubambisana ngokugqwesileyo umgangatho ophezulu, amava e-TV aphezulu. "
Amino Aria 6 Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli dvr IBC I-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, ukunciphisa i-bitrate, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Minerva Ott Ukuhlawula i-tv TV ITeknoloji yeTV Inkundla ye-Ultra HD Injini yeVidiyo	2017-09-12
Previous: Ukubonakala kubonisa i-Live OTT Transcoding Software kwi-IBC 2017
next: I-facilis iphumelela ngaphesheya kwe-Atlantic neReef